ပွဲအပြီးမှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်း မော်ရင်ဟိုကို လှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့ ကလော့ပ် – MySport Myanmar
ပွဲအပြီးမှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်း မော်ရင်ဟိုကို လှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့ ကလော့ပ်
မနေ့ညက ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ပွဲကြီးပွဲကောင်း အဖြစ် ဇယားထိပ်မှာ ရောက်ရှိနေခဲ့ကြတဲ့ လီဗာပူး အသင်း နဲ့ တော့တင်ဟန် ဟော့စပါး အသင်းတို့ဟာ အန်ဖီးလ် ကွင်းထဲမှာ အကြိတ်အနယ်ရှိရှိ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပြီး အိမ်ရှင် လီဗာပူး အသင်းက ၂ ဂိုး- ၁ ဂိုး နဲ့ အနိုင်ရရှိကာ ဇယားထိပ်ကို ပြန်လည်တက်လှမ်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကစားသမားတွေကြားထဲမှာ အကြိတ်အနယ် ရှိတဲ့ ပွဲစဉ်တစ်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ရုံတင်မက နည်းပြနှစ်ဦး ကြားမှာလည်း နည်းစနစ်ပိုင်း‌ဆိုင်ရာ အားပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲတစ်ပွဲလို့ ဆိုရပါမယ်။ ပွဲအပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ အချိန်မှာလည်း လီဗာပူး နည်းပြ ဂျာဂျန်ကလော့ပ် က စပါး နည်းပြ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို အပေါ်ကို လှောင်ပြောင်သလို အပြုအမူမျိုး ပြုလုပ်ခဲ့‌ပါသေးတယ်။
မော်ရင်ဟို ကတော့ ကလော့ပ် ရဲ့ အဆိုပါ အပြုအမူ အတွက် ဒေါသ ထွက်လျက်ရှိနေပြီး အကယ်၍ သူသာ ကလော့ပ် လို ပြုမူခဲ့ရင် သေချာပေါက် ကွင်းထဲက ထုတ်ခံရပြီ လို့ ပွဲအပြီးမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဂျာဂျန် ကလော့ပ် နဲ့ မော်ရင်ဟို တို့ နှစ်ဦးဟာ အရင်ကတည်းက ကွင်းဘေးဘက်ခြမ်းမှာ ပြုမူပုံတွေ၊ သရုပ်ဆောင်ပုံတွေကြောင့် နာမည်ကြီးပြီးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စပါး အသင်း အနေနဲ့ လီဗာပူး အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပေမယ့်လည်း မော်ရင်ဟို ကတော့ လီဗာပူး အသင်း အနေနဲ့ စပါး အသင်းထက် အမှတ်အနည်းငယ်သာ သာသွားတယ်လို့ ခံစားရကြောင်း ဆိုလိုက်ပါတယ်။ မော်ရင်ဟို ကတော့ ပွဲအပြီးမှာ သူ့ရဲ့ အမြင် နဲ့ ကလော့ပ် အပေါ် စကားအရ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
“ ကျွန်တော် သူ့ကို အကောင်းဆုံး အသင်းက ရှုံးခဲ့ရတာပါ လို့ ပြောခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကို သူက လက်မခံခဲ့ဘူး။ ဒါက သူ့ရဲ့ အမြင်ပါ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ်၊ ကွင်းဘေးဘက်ခြမ်းမှာ သူပြုမူသလိုသာ ကျွန်တော် ပြုမူခဲ့ရင် ကျွန်တော် အဲ့ဒီမှာ ရှိနေဖို့တောင် အခွင့်အရေး ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် သေချာပေါက် ထွက်ရမှာပါ။ ဒါကို သရုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ထင်တာလား ? သရုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ထင်တာလား ? ဒါမှမဟုတ် မင်း အနေနဲ့ ငါ့ကို ဒီကိစ္စအတွက် စတုတ္ထဒိုင်လူကြီး ဆီ သွားပြီး ဂွာဒီယိုလာလိုမျိုး စောဒက တက်စေချင်နေတာလား ? ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ အရာရာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒိုင်လူကြီးကတော့ သူ ပြုမူတဲ့ အပြုအမူ ကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါက ကျွန်တော့် အတွက် ပြဿနာ တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဝမ်းတော့နည်းမိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း သူပြုမူသလို ပြန်မပြုမူလိုက်ရလို့ပါ ” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မော်ရင်ဟို ရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ကို ကလော့ပ်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို မေးခဲ့တဲ့ အခါမှာတော့ “ ကျွန်တော့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ က ထင်ထားတာထက်တောင် ညံ့နေပြီ ထင်တယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ အသင်းက ရှုံးခဲ့တယ်လို့ သူကျွန်တော့်ကို ပြောခဲ့တယ် ထင်တာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အပြုအမူနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာမှ မပြောခဲ့ပါဘူး ” လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
MySport Myanmar2020-12-17T12:37:28+06:30December 17th, 2020|Football, Premier League|